Seddax ka mid ah saraakiishii Maxamed Siyaad Barre oo qurbaha ku badbaadi waayay - BBC News Somali
Image caption Jeneraal Maxamed Cali Samatar
Jeneraal Maxamed Cali Samatar wuxuu ka mid ahaa saraakiisha sida wayn ugu lug lahayd dhismaha milatariga Soomaaliya.
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa sannadkii 2010-kii go'aamisay in dacwad lagu soo oogi karo jenaraal Samatar.
Waxaa lagu eedeeyay xadgudubyo in uu siddeetamaadkii ka geystay Soomaaliya, gaar ahaanna gobollada woqooyi oo la sheegay inay ka dagaallameen ciidanka dowladda.
Maxkamad ku taal waddanka Mareykanka ayaa go'aamisay in Janaraal Samatar uu bixiyo lacag lagu ganaaxay taasi oo soo gabagabeyneysay muddo siddeed sano ah oo dacwad ay ku socotay.
Siyaasi reer Kenya ah oo Facebook soo fariistay isagoo qayilaya
Caddeymo aan aad looga hadlin oo muujinaya awoodda Al Shabaab ee Muqdisho
Jeneraal Maxamed Cali Samatar ayaa oggolaaday inuu bixiyo lacag dhan 21 milyan oo Dollar, taasi oo la siinayo dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay jir-dil dhacay xilligii uu dowladda Soomaaliya ku jiray siddeetamaadkii.
Lahaanshaha sawirka KORNYAL TUKE
Image caption Kornayl Tuke
Kornayl Tuke wuxuu ka mid ahaa saraakiishii madaxda ka ahayd ciidankii qaranka Soomaaliya ee dowladii Maxamed Siyaad Barre, Kornaylka wuxuu kamid ahaa sarakiil tababar fiican kusoo qaatay dalka Maraykanka sida uu sheegay qareenkiisa Joseph Peter.
Wuxuu dowladdii kacaanka ka ahaa taliyihii guutada shanaad ee milatariga Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa tacaddiyo ka dhan ah bani'aadanimada oo la sheegay in uu ka geystay goboladii waqooyi oo haatan la yiraahdo Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday Somaliland.
Dhacdooyinka lagu eedeeyay ayaa la sheegay inay dhaceen sannadihii 1970-meeyadii ilaa 1980-meeyadii, sida ku xusan warqadaha ninka dacwada gudbiyay.
Kornaylkan Soomaaliyeed ayaa loo heystaa dil 30 sanno ka hor dad rayid ah loogu geystay Magaalada Gabilay.
Tuke ayaase beeniyay eedaymaha loo haysto.
Horaantii buburkii Dolwaddii Kacaanka, Tuke wuxu kamid noqday saraakiil sarsare oo qoxootinimo isaga dhiibay wadamada reer galbeedka, gaar ahaan dalka Canada oo dowladda dalkaas ay muddo ka dib ogaatay in loo haysto eedeymo la xariira gobood fallo.
Kornaylka ayaa u wareegay wadanka Maraykanka, ka dib markii warbaahinta CBC ee Canada ay baahisay barnaamij lagu soo bandhigay gabood falada loo haystay, waxaana qaabka uu ku tagay dalka Maraykanka ka danbaysay xaaskiisa oo Visa ama dal ku gal usoo dirtay markii ay heshay dhalashada Maraykanka sannadkii 2006.
Dacwadda la xiriirta kiiskan oo in muddo ah soo jiitameysay ayaa si rasmi ah uga furmaysa maxkamad ku taala Mareykanka, sida ay shaaciyeen wargeysyada kala ah The Guardian iyo New York Times ee kasoo kala baxa dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
Maxamed Xasan Ismaciil Faarax
Image caption Maxamed Xasan Ismaciil
Jeneraal Maxamed Xasan Ismaciil ayaa ka mid ahaa saraakiishii dowladdii kacaanka, markii uu dalka Soomaaliya burburay wuxuu qaxooti ahaan u tagay dalka Kanada.
Maxamed Xasan wuxuu dalka Kanada ka soo galay dhanka Mareykanka sannadku markuu ahaa 1991-dii. Muddo kadib ayaa waxaa soo shaac-baxday in Jeneraal Maxamed uu galay dambiyo ka dhan xuquuda aadanaha.
Dhukumantiyo ka soo baxay maxkamd heer federal ayaa muujiyay in Maxamed uu mas'uul ka ahaa jirdil loo geeystay maxaabiis.
Sannadkii 1993-dii , waxaa laga saaray liiska dadka Kanada ay magan-gelyada siisay kadib markii la arkay calaamado muujinayay in uu galay dambiyo ka dhan ah bini'aadanimada.
Inkastoo Kanada ay go'aan ku gaartay in Xasan dalka laga musaafiriyo, haddana dalka lagama saarin.
Mana jirin cadeyn muujinaysa in Maxamed uu dalka ku sii noolaan karo. Si kastaba sannadkii 2011-kii Hay'adda Canada u qaabilsan Xuduudaha ayaa Faarax ku dartay liiska 30 nin oo lagu soo eedeyay in ay galeen dambiyo ka dhan xuquuqda aadanaha.
Xubno ka tirsan Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Canada ayaa walaac xooggan muujiyay kadib markii Maxamed Xasan Ismaciil Faarax loo magacaabay taliyaha booliska dalka Soomaaliya kuwaasi oo ku andacoonayay in ay nasiib darro tahay nin ku jira liiska dambiilayaasha loo magacaabo jago intaa la'eg.